(၁၄)ကြိမ်မြောက်သာမန်တနင်္ဂနွေ သြ၀ါဒ | Radio Veritas Asia
ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို အားဖြည့်ပေးမည်။ ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသော စိတ်နှလုံးရှိ၏။ သင်တို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည်လည်း သက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ငါ၏ထမ်းပိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ၏ဝန်သည်လည်း ပေါ့၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။”(မာတေဦး ၁၁၂၈-၃ဝ)
ခရစ်တော်၌ ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့....
ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ အနန္တမေတ္တာတော်ရှင်၊ ကယ်တင်တော်မူတဲ့အရှင် ယေဇူးရဲ့နာမတော်၌ ကောင်းချီးခံစားရပါစေကြောင်း ဦးစွာပထမ ဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာ ယေဇူးဘုရားရှင်က သင်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ထားရှိတဲ့ မိခင်မေတ္တာ ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုယ်တော်ရှင်ဟာ ထိခိုက်ကြေကွဲနေတဲ့လူသားတွေကို သူ့ရဲ့ အဆုံးမရှိ ကြွယ်ဝလှတဲ့ မိခင်ရဲ့ ကရုဏာမျိုးနဲ့ အခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို အားဖြည့်ပေးမည်။ ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ငါ့ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးရှိ၏။”
အခက်အခဲပေါင်းစုံကို (၄)လကြာအောင် ခံထမ်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒုက္ခဖိစီးမှုသက်သာရာရဖို့အတွက် ဘုရားရဲ့ သားတော်ကို မျှော်ကြည့်ကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တောင်းဆုတွေပြည့်ကြဖို့ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေဟာ ကပ်ရောဂါဆိုးဒဏ်ကိုအပြင်းအထန်ခံစားရပြီး လူပေါင်း(၁၁)သန်းကျော်ဟာလည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ သေဆုံးသူဦးရေဟာလည်း (၅)သိန်းကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေဟာ စိတ်နှလုံးကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေကလည်း ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှာလည်း မသေချာ၊ မရေရာတဲ့စိတ်က ဖိစီးနှိပ်စက်နေပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့စနစ်ကြောင့် ပဋိပက္ခတွေတိုးပွားနေပါတယ်။ ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဟာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့လူတန်းစားတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ပိုပြီးကြီးမားစေပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ လမ်းတွေပေါ်မှာ တိရစ္ဆာန်တွေလို သတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့(၃)ရက်ကလည်း ဖားကန့်မှာ လူပေါင်း(၁၇၀)ကျော်ဟာ မြေပြိုမှုကြောင့် သေကြေပျက်စီး ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို အားဖြည့်ပေးမည်။ ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ငါ့ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးရှိ၏။”
ကမ္ဘာပေါ်က အဖွံ့ဖြိုးဆုံး၊ အတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင်ဟာ ယခု အချိန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထိုးနှက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာနေရပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ဖိနှိပ်မှုကို ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေခံစားနေရပါပြီ။ အာဏာရှင်အစိုးရဟာ လူရာပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးခံရပြီး သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါပြီ။
ဟောင်ကောင်က ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပါတ်တော်က နှစ်သိမ့် မှုပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်က ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကို သက်သက် ညှာညှာဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ ဒုက္ခရောက်နေပါပြီ။ စစ်ပွဲတွေရှိနေတာကလည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုပါပဲ။ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ (၆၀%)နီးပါးဟာ ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို ခံနေခဲ့ ရချိန်မှာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် စားဝတ်နေရေးအခက်တွေ့နေကြရပါပြီ။ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်း ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာမှာ ကန့်သတ်ပိတ်ဆိုမှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာလည်း ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခဝန်ပိစေပါတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲသစ်တွေကြောင့် ပြည်သူ ပြည်သား (၁၂၀၀၀၀)ကျော်ဟာ အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကနေ ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ပြန်တော်ပြန်တွေဟာ အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရ ပါတယ်။ အခုလိုနာကျင်ကြေကွဲနေရတဲ့နိုင်ငံအတွက် ယေဇူးဘုရားရှင်ဟာ ကားတိုင်ထက်ကနေ နှစ်သိမ့်စကား မြွက်ကြားနေပါတယ်။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို အားဖြည့်ပေးမည်။ ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ငါထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးရှိ၏။”
ဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ စက္ကရမင်တူးတွေခံယူဖို့ အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရသလို မစ္ဆားတရားတော်မြတ်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ပူဇော်ခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ တချို့တွေအတွက် ကိုဗစ်ကာလမှာ ယုံကြည်ခြင်းဟာ စုံစမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ များစွာသော ဘာသာဝင်တွေ၊ ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ သီလရှင် တွေဟာ နာမကျန်းဖြစ်သူတွေနဲ့ သေခါနီးလူနာတွေကို ပြုစုရင်း အသက်ပေးခဲ့ကြ ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဟာ မွန်းတည့်ချိန်မှာ မှောင်အတိကျသွားစေခဲ့ပြီး ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာမှာလည်း သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးအစာနဲ့ အတူတကွ စုရုံးဝတ်ပြုခွင့်တွေ မရရှိတော့တဲ့အခါ ဘာသာဝင်အတော်များများဟာ ကားတိုင်တော်ထက်က ယေဇူးဘုရားရှင်လိုပဲ “ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ကို စွန့်ပစ်ထားတော်မူပါ သနည်း”လို့ မြည်းတမ်းကြပါတယ်။ အခုလို စိတ်ပျက် အားငယ်မှုတွေ ခံစားနေရသူများအတွက် ယေဇူးဘုရားရှင်ရဲ့ အသံတော်ဟာ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို အားဖြည့်ပေးမည်။ ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးရှိ၏။”
မိသားစုတွေဟာလည်း ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်းနဲ့ နွမ်းနယ်လာကြပါပြီ။ လူသန်းပေါင်း များစွာဟာ အလုပ်အကိုင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ ကလေးတွေဟာလည်း ပညာသင်ယူခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်ရှာရတာ ခက်ခဲနေပါပြီ။ ဝမ်းရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့မိသားစုတွေ၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအပြည့်အဝနဲ့ နေထိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် ယေဇူးဘုရားရှင်ရဲ့ နှစ်သိမ့်စကားက ကုစားပေးပါလိမ့်မယ်။
“ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို အားဖြည့်ပေးမည်။ ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ငါ့ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသော စိတ်နှလုံးရှိ၏။”
“ကိုယ်တော်သည် သင်တို့ကို ဂရုစိုက်တော်မူသောကြောင့် သင်တို့၏ပူပန်သောကများ အားလုံးကို ကိုယ်တော့်ထံ၌ အပ်နှံကြလော့။” (၁ ပေ ၅၇)
“ထာဝရဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်အားကိုးလော့။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် သိနားလည်ခြင်းကို မှီခိုအားထားခြင်းမပြုလေနှင့်။” (ပညာအလိမ္မာကျမ်း ၃၅) “သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်လည်း သက်သာရာ ရလိမ့်မည်။” (မာတေးဦး ၁၁ ၂၉)
ယေဇူးသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားပေးတော်မူပါ သလဲ။
ယေဇူးသခင်ဟာ ခမည်းတော်ဘုရားကို ပြသခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ လုပ်ကိုင်စရာများပြားလွန်းလို့ နွမ်းနယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ယေဇူးသခင်က ခမည်းတော်ဟာ သူအလိုတော်ရှိလို့ လုပ်စေချင်တဲ့အရာပြီးမြောက်အောင် လိုအပ်တဲ့ ဆုကျေးဇူးတော်တွေမှန်သမျှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးသနားမယ့် အကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ (၂ ကော် ၉၈) ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကို ပေးသနားမယ့်အကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ (ယာ ၁၅) ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရလို့ စိတ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မှာ ယေဇူးသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာ ရှိတဲ့ အကြောင်း (ဆာလံ ၆၃၅-၆)၊ ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခမည်းတော်ဘုရားဟာ ဉာဏ်ပညာတော်၊ ကရုဏာတော်တို့နဲ့ လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အစီအစဉ်များရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ (ယေ ၂၉၁၁)
ယေဇူးသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်လိုထပ်ပြောထားသလဲ။ ငြိမ်း ချမ်းခြင်းရဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ ယေဇူးသခင်က အခုလိုလမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်။
“ငါ၏ထမ်းပိုးကိုယူ၍ ထမ်းလျက် ထံမှ သင်ယူကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါသည် သိမ်မွေ့၍ နှိမ့်ချသော စိတ်နှလုံးရှိ၏။ သင်တို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည်လည်း သက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ငါ၏ထမ်းပိုးသည် ထမ်းလွယ်၏။ ငါ၏ဝန်သည်လည်း ပေါ့၏။”
ငါ၏ထမ်းပိုးကို ယူ၍ ထမ်းကြလော့။ ဘယ်ထမ်းပိုးမှ မပေါ့ပါဘူး။ ထမ်းပိုးထမ်းရ တာဟာ ဝန်ထုပ်ထမ်းထားရ သလိုပါပဲ။ ဖာရီဇေဦးတွေဟာ ဂျူးတွေရဲ့ ပညတ်ချက်တွေကို အရေးမကြီးတဲ့ပညတ်ချက်ပေါင်းများစွာဖြစ်အောင် ချဲ့ကားပြီး လူတွေကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ် စေကြပါတယ်။ အဲဒီပညတ်ချက်လေးတွေဟာ သူတို့တွေအကျိုးခံစားရဖို့ ဖြစ်လာပေမဲ့ သာမန် လူတန်းစားတွေအတွက်ကတော့ နေ့စဉ်ခံထမ်းရတဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ယေဇူးက ထမ်းပိုးကို အမြင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ကားတိုင်တော်ဟာလည်း ထမ်းပိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပြီး ယေဇူးသခင်က အဲဒီထမ်းပိုးအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပြစ်တွေကို ဆေးကြောပေးခဲ့ပါတယ်။ ကားတိုင်တော်ဟာ နှိမ့်ချခြင်းထမ်းပိုးပါပဲ။ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ ထမ်းပိုး ဟာ မေတ္တာတော်ထမ်းပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်ရှင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ မေတ္တာပညတ်ချက်(၂)ခု ဟာ အခြားသောပညတ်ချက်(၆ဝဝ)ကျော်ကို ချေဖျက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမေတ္တာပညတ်ချက် (၂)ခုက ဘုရားသခင်ကို ချစ်ဖို့နဲ့ တစ်ပါးသူကို ချစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝိညာဉ်သက်သာရာရဖို့ ယေဇူးသခင်သွန်သင်ခဲ့တဲ့နည်းကတော့ နှိမ့်ချ ခြင်းနဲ့ သိမ်မွေ့ခြင်းရှိဖို့ပါပဲ။ ဒီပါရမီနှစ်ခုက လောကတပ်မက်မှုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ စည်းစိမ်နဲ့ အာဏာကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတပ်မက်မှုတွေကြောင့် လူတို့ရဲ့ စိတ်ဟာ မငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါ ဘူး။ အဲဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယေဇူးသခင်က အခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
“ထို့ကြောင့် သင်တို့အား ငါဆိုသည်ကား သင်တို့၏ဘဝအသက်ရှင်ရေးအတွက် မည်သည့်အရာကို စားသောက်ရမည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သင်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မည်သည့် အရာကို ဝတ်ဆင်ရမည် ဟူ၍လည်းကောင်း စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း မရှိကြနှင့်။ အသက်သည် အစာထက်မြတ်သည်မဟုတ်လော။ ခန္ဓာကိုယ်သည် အဝတ်ထက် မြတ်သည်မဟုတ်လော။ မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို ကြည့်ကြလော့။ ထိုငှက်တို့သည် မျိုးစေ့လည်း မကြဲ၊ ကောက်နှံများကိုလည်း မရိတ်သိမ်း၊ ကျီများတွင်လည်း သိုလှောင်ခြင်းမပြုကြချေ။ သို့သော် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့၏အဖသည် ထိုငှက်တို့ကို ကျွေးမွေးတော်မူ၏။ သင်တို့သည် ငှက်များ ထက် သာ၍မြတ်ကြသည်မဟုတ်လော။” (မာတေဦး ၆း၂၅-၂၆)
သိမ်မွေ့ နှိမ့်ချခြင်းဟာ စိတ်ဝိညာဉ်မအေးချမ်းမှုကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ “နူးညံ့သိမ် မွေ့သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အမွေခံကြရလိမ့်မည်”လို့ ယေဇူးသခင်သွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိလိပိသြဝါဒစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း တစ်ပါးသူအတွက် မိမိကိုယ်ကို အလုံးစုံပေးဆပ်ခြင်းသာလျှင် ယေဇူးသခင်သွန် သင်ပြခဲ့တဲ့ “စိတ်ဝိညာဉ် သက်သာရာရမယ့် အကြောင်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှိမ့်ချခြင်းရှိတဲ့လူတွေဟာ ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီး မိမိတို့ဘဝကိုလည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်တော်မှာ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားကြပါတယ်။ ပူပန်သောကတွေဟာလည်း သူတို့ဘဝကနေ ပျောက် ကွယ်သွားကြပါတယ်။ ။
အဲဒီအချက်ဟာ ဒီကနေ့ဖတ်ရှုတဲ့ ပထမကျမ်းကနေ ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရောဖက် ဇာခရိက “တရားသဖြင့် စီရင်၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသခင်၊ သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည် မြည်းမနှင့် မြည်းကလေးကို စီး၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့် သင် ရှိရာသို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုလော့” (ဇာခရိ ၉း၉) လို့ ဟောထားပါတယ်။ မိမိကိုယ် ကို နှိမ့်ချသူတို့ဟာ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ။
ပရောဖက် ယေရမိက “ငါသည် သင်တို့ကို အကျိုးနည်းစေခြင်းငှာ ကြံစည်သောအကြံ မဟုတ်ဘဲ သင်တို့သည် မျှော်လင့်သောအကျိုးကို ရမည့်အကြောင်း၊ ငြိမ်ဝပ်စေခြင်းငှာသာ သင်တို့အဖို့ ကြံစည်သောအကြံတို့ကို ငါသိ၏” (ယေ ၂၉၁၁)လို့ ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က သင့်ရဲ့ဘဝအတွက် ကောင်းသောအစီအမံတွေရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သိထားရမှာက သင့်ရဲ့ လက်ရှိဘဝဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ၊ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည် တယ်ဆိုရင် ဘဝဟာ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ။
စိတ်ဒုက္ခအများစုဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ဘဝထဲကို ယူဆောင်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်စားတဲ့ထမ်းပိုးကို မထမ်းမိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမြင်ရှုထောင့်ကို ပြောင်းလဲခြင်း အားဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ဒုက္ခကို လျော့စေပါတယ်။ တစ်ပါးသူတို့အပေါ် လွှမ်းမိုးလိုစိတ်ရှိတာ၊ အာဏာနဲ့ စည်းစိမ်ယစ်မူးတာတွေဟာ လူသားတွေကို စိတ်ဒုက္ခအမိုက် မှောင်ထဲ ကျရောက်စေပါတယ်။ ကိုယ်ကာယတပ်မက်ခြင်းနဲ့ နေထိုင်ကျင့်ကြံခြင်းဟာ ကျွန်ုပ် တို့ဘဝကို ဖျက်ဆီးပါလိမ့်မယ်။ ဒီကနေ့ဖတ်ရှုတဲ့ဒုတိယကျမ်းမှာ ရှင်ပေါလုက ရောမမြို့သား တွေကို “သင်တို့သည် အသွေးအသား အလိုသို့လိုက်၍ ပြုမူကျင့်ကြံလျှင် သေကြရလိမ့်မည်။ သို့သော် ကိုယ်ကာယ၏တပ်မက်ခြင်းတို့ကို ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ချုပ်ငြိမ်းစေကြလျှင်မူ သင်တို့သည် အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်” (ရော ၈း၁၃)လို့ ဆုံးမထားပါတယ်။
ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှာ ယေဇူးသခင်ရဲ့ နှစ်သိမ့်စကားကို ကြားနာခဲ့ရပါတယ်။ ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါဟာ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ နည်းပါးပေမဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေအပေါ်မှာတော့ စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီး စိတ်ပူပန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေကိုလည်း ဆက် လက်ပိတ်ထားရတဲ့အတွက် ဘာသာဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် စိတ်ပူပန်ကြရပါတယ်။ ဒီလိုကာလတွေဟာ ခက်ခဲကြပ်တည်းတဲ့ကာလတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ယေဇူးသခင်ဟာ ယမန်နေ့၊ ယနေ့၊ မနက်ဖြန် အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ် တို့ဟာ ယေဇူးသခင်ရဲ့ တပည့်တော်ကြီးတွေနဲ့တူပါတယ်။ သူတို့စီးလာတဲ့လှေဟာ မုန်တိုင်း ဒဏ်အလူးအလဲခံနေရအချိန် တပည့်တော်ကြီးတွေဟာ ဆရာသခင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အိပ် ပျော်နေတာကိုတွေ့ပြီး ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယေဇူးဟာ အရာအားလုံးကို စိုးပိုင်တော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့ပါတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ်မှာလည်း အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ ထွက်ပေါက် မရှာနိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တော့ ယေဇူးသခင်ဟာ ကောင်းသောဆမာရိတန်ပါပဲ။ ကိုယ်တော်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကုသမှုပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တော်ရှင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို အထံတော်မှာ ခိုလှုံဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ တံခါးကို ခေါက်ရင် ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် တံခါးခေါက်ကြဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ ပူပန်သောကရောက်ချိန်မှာ ကိုယ် တော်ရှင်ကို အားကိုးရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ငြိမ်းချမ်းစေပါလိမ့်မယ်။
ယေဇူးသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတ်တော်ဟာ ကမ္ဘာမြေကို ကုသခြင်းပေးပါစေ။ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ တည်ရှိတော်မူခြင်းဟာ စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေကို နှစ်သိမ့်မှုပေးပါစေ။ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ဟာ ကပ်ရောဂါဆိုးဒဏ် ခံခဲ့ရသူတွေကို ပြန်လည်သက်သာရာရပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပြစ်အတွက်ကြောင့် ကားတိုင်တော်ကို ထမ်းယူခဲ့တဲ့ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ ညင်သာ သိမ်မွေ့ခြင်းကို ကိုယ်တော်ရဲ့ ကုသခြင်းတန်ခိုးအစွမ်းမှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိရပါစေ။
ဘုရားရှင်သာလျှင် အရာအားလုံးကို စိုးပိုင်စီရင်တော်မူတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ငြိမ်းအေးသာယာစွာဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါစို့။
နောင်လာမယ့်ရက်များမှာလည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကို အပြည့်အဝ ခံစားကြရပါစေ။
ကာဒီနယ် ချားစ်ဘို ၏ (၁၉)ကြိမ်မြောက် သာမန်တနင်္ဂနွေနေ့တရားတော်
Fr. Mariano Soe Naing (SDB) ၁၉ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဩဂုတ်လ ၉၊ ၂၀၂၀
Fr. Mariano Soe Naing (SDB) ၁၈ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ ဩဂုတ်လ ၂၊ ၂၀၂၀
ကာဒီနယ် ချားစ်ဘို ၏ (၁၈)ကြိမ်မြောက် သာမန်တနင်္ဂနွေနေ့တရားတော်